Gavanaha Kilifi oo sheegay in uu diyaar u yahay in uu hortago gudiga EACC – The Voice of Northeastern Kenya
Gavanaha Kilifi oo sheegay in uu diyaar u yahay in uu hortago gudiga EACC
Gavanaha Maamul goboledka Kilifi ee gobolka xeebta ee dalka Amason Kingi ayaa sheegay in uu la shaqeyn doono gudiga anshaxa iyo la dagaalanka musuqmaasuqa ee EACC oo baaritaano kusameyn doonta lacagta laga lunsaday maamulka uu hogaamiyo.
Isago ka hadlayay kulan ay lahaayen mas’uuliyinta xisbiga ODM ayaa sheegay in uu tagi doono xafsiyada gudigaasi maalinta isniinta ah isbuuca soo socda.
Guddiga ayaa Mr Kingi ka doonaya in uu sharaxaad ka bixiyo arrimaha ku saabsan macluumaad kale oo muujinaya in uu maamulkiisa si aan kala caddeyn u isticmaalay lacag dhan 342 million oo shilin.
Waxaa la doonayay in uu shalay hortago gudiga anshaxa balse waxaa uu sheegay in uu shaqo u hayay shacabka countiga laga soo dortay sidaas awgeedna ay caqabad ku noqotay in uu u soo safro Magaalada tan Nairobi.
Ilo wareedyo shalay laga helay guddiga EACC ayaa sheegaya in madaxa maamul goboleedka KIlifi la weydiin doono in lacagtaasi ay qeyb ka tahay lacag dhan 1.1 billion oo shilin oo dhawaan la sheegay in hab musuqmaasuq ah looga lunsaday dowlad goboleedka Kilifi.
Waxaa uu hogaamiyaha Kiligi ku eedeeyay xisbiga jubilee in ay doonayaan sidii u siyaasadeyn lahaayen musuqmaasuq countigaasi Kilifi laga soo sheegay islamarkaana ay sumacadiisa hoos u dhigi lahaayen.
Amason Kingi oo xubin fir fircoon ka ah xisbiga mucaaradka ah ee ODM ayaa dhawaanahaan wajahayay eedeymaha musuqmaasuqa ee la xiriira dhaqaalaha faraha badan ee la lunsaday, in kastoo uu isagu gaashaanka ku dhuftay dhalilahaas.
← Ninki la sheegay in uu iska dhigayay dhaqtar oo damiin lacageed lagu sii daayay
Fransiska oo sheegay in uu fashiliyay weerar argigixiso →